Kugadzira Ubuntu server yakachengeteka. Mamwe matanho ekufunga | Linux Vakapindwa muropa
Ini munguva pfupi yapfuura ndakafunga kuti yaive nguva yekuisa ese angu mapurojekiti aida webhu kubata pamwechete pane imwechete server. Seva iyo zvaizonditendera kuti ndive nedanho rekutonga izvo zvakajairika zvekutambira zvirongwa zvisingaite.
Chokwadi zvinoreva Ini ndini ndinofanira kuchengeta zvinhu zvaimbove mutoro wemupi wangu. Semuenzaniso, kuchengetedzeka uye kugadzirisa.
1 Kugadzira Ubuntu server yakachengeteka. Kugadzira iyo firewall
2 Automating inogadziridza
2.1 Inoshanda LivePatch
2.2 Kugadzira sevha yakachengeteka neisina kuchengetedzwa otomatiki meseji
Kugadzira Ubuntu server yakachengeteka. Kugadzira iyo firewall
Firewall kana firewall chishandiso che software icho monitors network traffic ichiteerera kune mapakeji edata kuyedza kupinda kana kubuda. Izvo zvinoita saizvozvo nekushandisa pre-yakasimbiswa chengetedzo mitemo uye inosarudza kuti ndeapi anogona kuzviita.
Mukuita iri mhando yemuganho unochengetedza pakati pe server neInternet uye inova nechokwadi chekudzivirira kupinda kwevanhu vasina mvumo kana software yakaipa.
Mune chaiwo maseva akasarudzika (Zvichienderana neanopa) isu tichava nesarudzo mbiri; firewall yekunze iyo mitemo inotarisirwa kubva padanho rekutonga kana firewall yemukati. Avo vari mune vanoziva vanokurudzira pese pazvinogoneka kushanda neari kunze.
Ubuntu inoshandisa chirongwa chinonzi Uncomplicated Firewall seye yemukati firewall nekumisikidza. Tinogona kuona kana iri kushanda nemurairo
Kana isina kuiswa, tinogona kuzviita nemirairo:
Unogona kutanga firewall neiyi kuraira:
LivePatch ibasa rinobva kuCanonical, iyo kambani inovandudza Ubuntu uye ndeyekudyidzana uku chete. Ini ndinokuyeuchidza iwe kuti kune izvi zvinyorwa isu takavakirwa pane chaiyo yakavanzika server inomhanya iyo server vhezheni yeUbuntu 20.04.
Kubatsira kukuru kweLivePatch ndekwekuti Inotendera kushandiswa kwekuchengetedza zvigamba kuLinux kernel pasina kukosha kwekutanga server. Ngatibude pachena. LivePatch inoshandisa zvigamba kune yazvino kernel. Kana iwe ukakwidziridza kune tsanga nyowani, uchafanirwa kutangazve.
Iyo sevhisi inowanikwa pachena muripo weUbuntu hwakawedzerwa rutsigiro shanduro.
Kuti uiite iyo unoda chiratidzo chii iwe chaungaenda kuenda peji rino. Ita shuwa kuti Ubuntu yemunhu sarudzo yakasarudzwa (kunze kwekunge iwe uchida kubhadhara kutsigira kwekutengesa) uye tinya pa Tora chiratidzo chako cheLivePatch.
Iyo inotevera skrini inokubvunza kana iwe uine Ubuntu One account, kana usinga, inokupa iwe sarudzo yekugadzira imwe.
Paunopinda mukati, zvinokuratidza chiratidzo cheakaundi yako uye zvinokuudza iwe kuti ndeapi mirairo yaunofanira kunyora. Mirairo ndeiyi:
Ndokumbira utarise kuti chiratidzo chinogona kushandiswa chete mahara pamachina matatu.
Shandisa uyu kuraira kutarisa mamiriro echishandiso:
Kumanikidza kutarisa kutsva, nyora:
Kugadzira sevha yakachengeteka neisina kuchengetedzwa otomatiki meseji
Pandakatanga kugadzira mawebhusaiti, Ini ndanga ndichishandisa yakavhurika sosi yemukati maneja yaive ichangotanga kuvandudza, uye wekutambira mupi uyo wandakazodzidza akange ari mushingi. Rimwe zuva pandakanga ndarara zvisina kunaka, ndakaita zvandisingamboiti. Nap. Mumaawa maviri iwaya mumwe munhu akatora mukana wekusagadzikana muprojekti, kushaikwa kweruzivo uye kushomeka kwesimba remupi wekutambira kwandiri.Kuisa peji rekunyepedzera pane yangu saiti kuba data kubva kune Bank Of America vatengi. Ini ndinokuvimbisa iwe kuti BOA haitore zvinhu zvakadaro chaizvo.
Hunhu hweizvozvo ndizvozvo Chero iwe uine mumwe munhu zuva rese rinotarisa sevha, zviziviso zvematambudziko ezvekuchengetedza uye kuwanikwa kweshanduro nyowani dzekushandisa kana iwe uri kutsvaga nzira yekugadzirisa nyaya yacho.
Neraki, ivo vanogadzira Ubuntu vaisanganisira kugadzirisa
Matanho ekumisikidza aya anotevera.
Isu tinoita shuwa kuti system yacho iri padanho ne:
Isu tinoisa zvirongwa zvinodikanwa
Muhwindo rinovhura sarudza Hapana gadziriso
Isu tinotanga chirongwa ne
Muhwindo rinovhura, tinya kuti ugamuchire otomatiki zvigadziriso.
Iye zvino tinofanirwa kugadzirisa zvimwe zvinhu.
Kudzvanya CTRL + W kutsvaga iyi tambo Kusatarisirwa-Kwidziridza :: Tsamba
Uye zadza neyako email kero.
Wobva watsvaga mutsara uyu Kusatarisirwa-Kwidziridza :: Otomatiki-Reboot
Uye simbisa kuti ichokwadi. Izvi zvinobvumidza iyo system kuti itangezve otomatiki kana zvichidikanwa.
Dhinda CTRL + X uye bvuma kuchengetedza shanduko.
NaCTRL + W tsvaga email_adress uye dzokorora kero yawakaisa pakutanga.
Sevha neCTRL + X uye bvuma kuti ndinozviita pamwe neshanduko.
Edza kumisikidzwa ne
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kugadzira Ubuntu server yakachengeteka. Mamwe matanho ekufunga